Ahoana ny fomba famolavolana sy famokarana lakolosy ao amin'ny dacha - Zavamaniry zavamaniry mihamitombo - 2019
Tsiambaratelo ny lakolosy mamelovelo
Bellflower (Lat. Campánula) dia karazana zavamaniry mahazatra indrindra avy amin'ny fianakaviana Bellflower.
Ny fianakaviana dia ahitana karazany maherin'ny efa-jato mitombo ao amin'ny firenena manana toetr'andro.
Ny lakolosy dia mitombo ao Caucasus, Siberia, Azia, Eoropa, ary koa any Amerika Avaratra. Ny ankamaroan'ny endrika voajanahary manana fahombiazana goavana dia ny isan'ny olona any an-jaridaina, satria sarobidy, ny ririnina ary ny tsy fahampian-tsakafo.
Ny lakolosy karazana zaridaina, novokarin'ny fisafidianana, dia manana onja maro tsy tambo isaina ary be dia be. Na izany aza, sarotra kokoa ny mikarakara azy ireo, satria mitaky fitarainana bebe kokoa amin'ny toe-javatra iainany izy ireo.
Na izany aza, raha tsy mihaino ny sombiny madinidinika ianao, dia mety hahitana zavamaniry izay mifanaraka amin'ny faritra rehetra sy ny toetr'andro ny ankamaroan'ny lakolosy.
Ahoana ny fomba hampitomboana ny lakolosy ao amin'ny tranokalanao
Rano sy tondra-drano
Mulching sy fihosotra
Ny fanondranana voninkazo
Ny fampielezana ny lakolosy
Fampiharana sy toetra ilaina amin'ny klokany
Fomba hifehy ny lakolosy fanosihosena
Zana-taratra tsy hita isa no zaraina araka ny toetra samihafa. Amin'ny alalan'ny androm-piainan'ny fiainana - lakolosy maharitra sy fahagola, ary karazam-borona isan-karazany no heverina ho isan-taona.
Satria misy karazany 300 mahery eto amin'izao tontolo izao, Zarao ho vondrona lehibe telo ary miresaka momba ny toeram-ponenana, dia ny ala, lakandrano ary lakolosy havoana.
Fantatrao ve? Any Angletera, misy ny finoana fa ireo lakolosy ireo dia nodiovina teo amin'ny tratrany, ary noho izany dia mitondra fiadanana ao an-trano izy ireo. Noho izany dia heverina ho masina ny voninkazo.
Mivelatra tsara eo ambanin'ny hazo ny lakolosy any an'ala, saingy misy lanjan'ny kely indrindra amin'izy ireo, tsy toy ny masoandro be fitiavana. Ireo tompon'ireo faritra misy ala, izay mazoto manamboatra ny taniny, dia afaka misafidy amim-pitandrovana ity sokajy klokely ity.
Ny karazana ala mamy sy manjopiaka dia ahitana:
Ny lelavon'ny harambato dia mpirenireny, ary mahatratra 1 metatra ny haavony. Nomena ny anaran'ilay ravina. Ny voninkazo amin'io karazana io dia tena lehibe, shirokopolokolchatye, hazakazaka ary mahatratra 4 cm ny diamondra.
Misy karazana ihany koa ny endriky ny voninkazo. Ny fotoana fivalozana dia azo faritana amin'ny volana Jona-Jolay.
Ny lakolosy Broadleaf - toy ny lakolosy mamelam-borona, manjelanjelatra am-pitiavana. Mirefy 1,5 m eo ho eo izy io. Misy tsokan-kavoana mahitsy, ary koa voninkazo tokana miaraka amin'ny ravina fotsy izay ao amin'ny fivoahana. Amin'ny ankapobeny dia fotsy fotsy na mainty izy ireo. Ny tampon'ny voninkazo dia mitranga amin'ny volana Jolay.
Ny pokolok'io saka io dia tia ny masoandro, nefa koa mamela fandeferana. Ny tongotra dia mihoatra ny 1 m. Raha miresaka momba ny karazana klôly isika, dia io karazana io dia miavaka amin'ny karazana zaridaina samihafa. Matetika izy ireo dia voninkazo misy loko manga amin'ny racemes. Ny vanim-potoanan'ny voninkazo dia hatramin'ny volana Jona ka hatramin'ny fiandohan'ny fararano.
Ny lakolosy dia feno - toy ny peach-bell, fialokalofana sy tsy mendrika. Ny haavon'ny toerana avo indrindra dia 0,8 metatra. Ny voninkazo dia marevaka manga amin'ny felam-boninkazo amin'ny endriny ivelany. Ny vanim-potoanan'ny voninkazo dia ny fahavaratra. Ny endriky ny garda amin'io zavamaniry io dia miavaka amin'ny voninkazo roa.
Misy karazana sahona maro izay mitaky taratra mivantana avy any an-tanety, izay mitovitovy amin'ny tontolo voajanahary. Ny lakolosy mahaliana sy mampiavaka indrindra.
Ny lakolosy Crimea - fikorontanana mitombo ao Krimea. Ny haavony dia afaka hahatratra 15 santimetatra hatramin'ny 50 santimetatra eo ho eo. Misy tsiranoka matevina sy tsiranoka marevaka amin'ny voninkazo maniry izay mitombo lavabe.
Ny lakolosy dia avo lenta - iray amin'ireo karazana malaza indrindra amin'ny fianakaviana. Piran-jazakely maherin'ny 1 metatra ny haavony. Ny singa tena miavaka indrindra dia voninkazo mavokely. Izy io dia heverina ho karazana varotra "Cup and Saucer", ny voninkazo izay misy ifandraisany amin'ny dite.
Ny lakolosy havoana dia heverina ho malaza indrindra amin'ny fianakaviana, satria ny kolontsaina toy ny zaridaina, zaridaina sy vatolampy karakaina dia nalaza nandritra ny fotoana lava be. Matetika ny voninkazo dia miorina eny am-pototry ny tendrombohitra alpine na eo amin'ny vato matevina.
Ity karazana ity dia azo zaraina ho vatolampy sy tany lonaka. Ny endriny tena izy dia ny klokètin'i Scheuchzer, ny tsela dia ny tirsovidny, ny lakolosy dia alika, ary ny klako dia gargansky.
Ny lakolosy Sheichzer dia mitombo indrindra amin'ny ala honko. Ny rhizomatous dia maharitra isan-taona, ka ny haavony dia mitsangatsangana ary mahatratra 30 cm ny haavony. Ny iray na ny voninkazo dia manana loko maitso. Matetika izy io no maniry mandritra ny fahavaratra.
Bluebell lakolosy - farantsakely biennial, hatramin'ny 50 santim-bovoka. Misy tsiranoka matevina sy mahitsy. Ny ravina dia mamelatra rosette, izay matetika be dia be sy miloko. Ny voninkazo sy ny voninkazo mavo dia mamelana felam-boninkazo. Miposaka amin'ny fahavaratra ny fahavaratra.
Ny klongam-bolo vita amin'ny biriky dia mitombo ao amin'ny vato fotsy ary mahatratra hatramin'ny 15 santimetatra. Ny lolo marevaka dia manana loko mena ary ny voninkazo izay efa nanjary lasa loko matevina. Ny flowering dia mitranga amin'ny faran'ny volana Mey ary maharitra iray volana.
Ny klokan'i Gargan dia vatosoa ary afaka mitombo ao anaty haizina. Ny lakolosy dia mamorona kiraro madio misy haavo 15 santimetatra. Ny voninkazo manga manga amin'ny endriky ny asterisk dia manambara fa amin'ny fiandohan'ny fahavaratra.
Fantatrao ve? Maro ny zavatra inoan'ny olona mifandraika amin'ireo loko ireo. Araka ny iray amin'izy ireo, dia tsy misy afa-tsy indray mandeha isan-taona ihany ny lakolosy, izany hoe tamin'ny alina mahagaga teo am-piandohan'ny an'i Ivan Kupala, ary dia nankasitraka ny fahavaratra nandritra ny fahavaratra.
Ireo karazana ireo dia samihafa sy tsara amin'ny fomba samihafa. Tokony halefa any amin'ny tranokalanao izy ireo.
Ho an'ny karazana zavamaniry izay tsy dia mahazatra loatra amin'ny fambolena fambolena, ny fambolena, ny fikarakarana sy ny fambolena bluebells dia tsy mampisy fahasarotana goavana, satria ity vokatra ity dia tsy dia mendri-piderana loatra ary afaka mampifanaraka amin'ny toe-piainana samihafa misy.
Na izany aza, ny fiarovana ny endriky ny endriky ny fitomboan'ny vanim-potoana sy ny haben'ny tsimokaretina, ny fivalanana maharitra ary ny fitohizan'ny fitomboana dia tsy azo atao afa-tsy amin'ny fomba tsara indrindra hanorenana ny fepetra toy izao izay hanamafisana ny lafiny rehetra amin'ny teknolojia momba ny fambolena ho an'ny karazana maro.
Vitsy ny zavamaniry maniry ny faritra misokatra sy manjelanjelatra, fa ny sasany izay mitombo ao anaty fehikibo dia mamelatra kokoa raha ao anaty alokaloka. Na dia ireo karazan-java-maneno mahafinaritra ao amin'ny klokany aza dia mitondra tsara ny alokaloka ampitomboina, ary koa mitombo kokoa amin'ny toe-javatra toy izany amin'ny masoandro misokatra tanteraka.
Zava-dehibe izany! Tsy tiany ny lakolosy rehefa mihamangatsiaka ny tany. Mety maty anefa izy ireo.
Ohatra Campanula campanula (Campánula) dia mamy, saingy raha mafana sy maina dia mila rano izy matetika. Ny karazam-borona ao amin'io zavamaniry io dia voakasik'ilay tsy fahampian-tsakafo.
Raha ny fanafody, Ny ankamaroan'ny lakolosy dia tsy mila sakafo, Fa mbola mahafinaritra ihany, fara fahakeliny indray mandeha, amin'ny lohataona, na alohan'ny fisehoan'ny vonomoka, dia ampio kely vongana miaraka amin'ny singa marindrano.
Ireo entona toy izany dia azo vidiana amin'ny fivarotana zaridaina na fivarotana. Ilaina ihany koa ny mihaino tsara ny soso-kevitra.
Ny nitroka dia tokony ho ampahany betsaka amin'ny habetsahan'ny phosphorus sy potassium. Azonao jerena ao amin'ny fonosana izany.
Ny fikarakarana ny lakolosim-bolo toy ny mulching dia tokony hatao aorian'ny famolavolana mivantana ny zavamaniry iray eo amin'ny 5 santimetatra eo ho eo. Ankoatra izany, ny dingana dia atao amin'ny fararano mba hisorohana ny hatsiaka.
Mba hanamafisana ny hamafin'ny voninkazo dia nesorina ireo voninkazo izay nokopaka. Tsy ilaina ny fametahana ny lakolosy.
Ny fanosehana dia tanterahina amin'ny dingana maromaro:
Ny tsimparifary hita ao amin'ny fandriana fotsy, mihamaro amin'ny voa. Esory ny tsimparifary mandra-pahatongan'ny fotoana hanombohan'ny masomboly. Mbola hijanona kely ihany ny tsimparifary.
Rehefa ampiasaina ilay fitaovana dia tokony hialana ny fifandraisana akaiky amin'ny zavamaniry, satria mety hidona lalina ao anaty tany ny haingo ary hanimba ny fakan'ny lakolosy.
Ny fanosorana dia tanterahana amin'ny andro mafana, satria amin'ity tranga ity dia mitombo haingana ny tsimparifary. Amin'ny toetr'andro mafana, ny tsimparifary izay voamaina dia mety ho lasa loharano miverimberina amin'ny endriky ny aretina sy ny bibikely samihafa.
Ny fanondroana ny lakolosy dia mahafinaritra amin'ny fahalavoana.
Ilaina ny manatanteraka ny famindrana ny lakolosim-borona amin'ny lohataona na amin'ny lohataona. Any am-piandoham-bolana, aorian'ny fivoahan'ny ranomandry, afaka mandingana ny lakolosy ianao, izay manana rafitra fakan-kery matanjaka.
Raha toa ka misy rafitra fakan-drivotra tsy misy fiafarana ny rafitry ny klioba, dia tsara kokoa ny manetsaka ireo zavamaniry rehefa mafana ny tany, izany hoe amin'ny volana Mey. Amin'ny fararano dia tsara kokoa ny famokarana ny lakolosy amin'ny fiandohan'ny volana septambra, mba hahafahan'ny fototarazo miorina alohan'ny hanombohan'ny hafanana.
Ny fangatahana ny famolavolana ny lakolosy miaraka amin'ny rafitra fakan-doko sy mangarahara, ny mpamboly dia manome ny valiny fa tsara kokoa ny manamboatra (manaparitaka) zavamaniry mandritra ny voninkazo na amin'ny vanim-potoana hafa.
Ny lakolosy dia mila mihetsiketsika amin'ny tanimanga kely kely, mba tsy hanimba ny fototarazon'ny zavamaniry.
Zava-dehibe izany! Ny lavaka izay ahafahanao manondrotra ny lakolosy dia tokony ho tsara rano, raha tsy izany dia mety maty ny zavamaniry!
Ao amin'ny fanao amin'ny zaridaina, misy teknika isan-karazany dia fantatra fa ampiasaina amin'ny fambolena fianakaviana miboridana. Mila mandray an-tanana ny sasantsasany amin'ireo endri-javatra ianao, ary avy eo dia hahazo antoka ny fahombiazanao ianao.
Tokony hotadidina fa ny ankamaroan'ny lakolosy dia mitombo eny an-tendrombohitra. Sarotra ny mamboly azy eny amin'ny tany lemaka, noho izany, ny fambolena sy ny fananganana dia tsy atao afa-tsy amin'ny tranga faratampony. Ohatra iray ny Campanella.
Ny fampielezana ny lakolosy dia azo atao amin'ny fizarana ny kirihitra, ny voany, ny tavy. Mandritra izany fotoana izany, ny fitomboan'ny famolavolana ny voa dia heverina ho fomba malaza indrindra.
Ny karazam-pamokarana dia miankina amin'ny karazan-javatra samihafa sy ny endriky ny zavamaniry, ny endriky ny fiainana. Ohatra, isan-taona isan-taona dia tsy mamokatra afa-tsy amin'ny voa, sy dyuletki - ary ny voa, ary ny fametahana.
Amin'ny famokarana voa dia manomboka ny fanangonam-bokatra avy amin'ny bluebells rehefa manodina volomparasy izy ireo, ary mandra-panokatra ny valizy. Rehefa tapitra ny dingan'ny famonoana dia tsy maintsy arotsaka amin'ny voangory ny voany.
Ny masom-bozaka dia tena kely, noho izany dia azo afangaro amin'ny kofehy izy ireo, efa nopotehiny an-tselatra kely, na tamin'ny fasiana mena. Ny voa avy amin'ny lakolosy dia tsy maintsy afafy mivantana eo amin'ny tany na mialoha mba hampiroborobo ny zana-ketsa mba hambolena ao amin'ny zaridaina miaraka amin'ny fahatongavan'ny andro mafana.
Maro ireo karazan-tsakafo. Hatramin'ny volana febroary ka hatramin'ny volana Mey dia tapaka ny tapaka ary misy telo voapetraka isaky ny sela. Ny fananganana ny fototry ny lakolosy dia azo atao ao anatin'ny 21 andro. Famafàna fanisahana vita amin'ny lohataona.
Mba hahazoana famokarana mahomby kokoa dia ilaina ny mampihatra ny tsiranoka manitra.
Ny fampiasana sarimihetsika dia heverina ho toy ny vahaolana voatery hahafahany mamorona haitraitra be, satria ireo lakolosy dia mitaky ny endriky ny hafanana mandritra ny fitomboana.
Tokony hotsarovana fa ny filma dia tsy tokony handainga amin'ilay orinasa. Ity fomba fiasan'ny karazana zana-bolo dia tena mahomby.
Amin'ny fampiasana ny fomba fizarana ny kirihitra, ny lakolosy dia nohiraina voalohany, avy eo dia tapaka ny tifitra etsy ambony ary manapaka amin'ny delenki amin'ny antsy / spade. Io delenka io dia tokony hisy fotony sy tsimokaretina ho an'ny fanavaozana, avy eo dia tokony hambolena ao anaty lavaka mba hahavelona ny tsimok'aretina.
Amin'ny ankapobeny, ny lakolosy dia azo ampiasaina amin'ny tanjona milamina. Manana karazana fanafody maromaro koa izy: anti-inflammatory, antimicrobial, sedra, ary faniriana.
Ny lakolosy ihany koa dia nahitana fampiasana ny fitsaboana aretina sasany, toy ny kohaka, alahelo, tazo, fitsangatsanganana avy amin'ny uterine, ravin-kazo mavesatra.
Fantatrao ve? Ny lakolosy dia hanampy amin'ny fanasitranana ny ratra rehefa manaikitra ny alika, raha manao kitapo azy ianao.
Ny lakolosy dia fitsaboana tsara ho an'ny lichen. Ny vehivavy koa dia afaka manamaivana ny fihanaky ny menopause sy ny fanaintainana mandritra ny fadimbolana. Raha manan-janaka bevohoka ao an-tranonao ianao, dia homena hery izy amin'ny alàlan'ny famokarana felam-bolo iray nanampy ny fandroana handroana.
Zava-dehibe izany! Aza mampiasa ny lakolosy raha toa ka misy ny fanoherana na ny fahatsapana ho ambony. Ankoatra izany, tsy voatery hampiasa voambolana finday ho an'ny vehivavy bevohoka sy ankizy hatramin'ny 6 taona. Alohan'ny hampiasana ny lakolosy ho an'ny zava-mahadomelina dia tokony hifantina amin'ny dokotera ianao.
Ho an'ny tanjona medikaly, ny voa sy ny fakan'ny voina dia ampiasaina mba hanafoanana, hosodoko na vovoka.
Amin'ny ankapobeny, ity karazana zavamaniry ity dia tena tsy mety amin'ny aretina na ny bibikely. Ny aretin-damosina lehibe indrindra dia ny moka izay mihinana voninkazo sy ravina.
Sarotra ny miatrika izany. Amin'ny alalan'ireo fepetra momba ny fambolena, izany hoe amin'ny alàlan'ny fambolena ahodin-tsakafo, dia afaka misoroka ny fisehoany.
Azonao atao ihany koa ny manintona ireo mpikarakara zaridaina avy amin'ny natiora: zana-kiraro, kiraro na hevi-dratsy. Afaka mampiasa metaldehyde ny mpiasa simika.
Misy koa mihinana ny lakolosin'ny tavoahangy, ary mahafinaritra ny fakan'ny zavamaniry. Raha te hampihetsi-po ny ain'ny pesto ianao, dia mila mibontsina ny tany mandritra ny vanin-taona miposaka. Izany dia handrava tanteraka ny fihetsiky ny orsa ary hahatonga azy ho sarotra aminy ny hijinja sakafo, hamotika ny atody sy ny lava.
Zava-dehibe izany! Raha mampiasa mullein hamahana ilay orinasa ianao, dia afaka manintona bera iray izy io.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Tsiambaratelo ny lakolosy mamelovelo